Nanokatra ny « Sômaroho ! »: nifarombahana ny nijery an’i Daphne | NewsMada
« Calée » sy « Jusqu’à la gare ». Ireo hira roa ireo no tena ahafantarana an’i Daphne, ilay mpanakanto teratany kameroney, anisan’ny vahinin’i Wawa mandritra ny « Festival Somarôho ! » andiany faha-5. Samy maika te hahita mivantana an’i Daphne ireo mpankafy, hany ka nifarombahana ny niditra tao amin’ny Libertalia Chez Loulou, ny alin’ny alarobia teo. Fotoana nanaovana ny alim-pandihizana ofisialy, nohafanainy niaraka tamin’ny tarika Wawa io.
Niandry elaela, satria efa nisasaka ny alina vao niakatra an-tsehatra i Daphne, namaly ny antsoantson’ireo mpankafy. Sehatra efa nafana anefa, satria tao anatin’ny ambiansy tanteraka ireo tsara vintana, tafiditra tao anatin’ny toerana. Nitohy mandra-maraina kosa izany, rehefa nodimbiasin’ny tarika Wawa.
Tsy tapitra hatreo, nitohy omaly alina ny fandraisana anjaran’i Daphne. Anisan’ireo nanokatra ny andiam-pampisehoana teto amin’ny kianjan’Ambodivoanio izy. Vao ny alina voalohany dia efa hipoka olona ny kianja, tonga hijery ireo mpanakanto efa nandrasana ela. Ankoatra an’i Daphne mantsy, nandrasan’ny mpankafy koa ry Flash B sy ny “Fausse jocker”. Teo koa ry Ariane sy ry Lico Kininike ary i Stéphanie.
Efa eto Nosy Be, hatramin’ny talata teo, kosa ry One People Band, tarika natsangan’i Lucky Dube ary manohy mihira ny sanganasany. Anjaran’izy ireo indray ny miaka-tsehatra, anio alina.